Kungani ingane ikhuphuka futhi ikopela?
Zonke izingane ziqamba amanga, kodwa lokhu kuhlale kumcasule abazali? Phela, ukwethembeka kungenye yezinto eziyinhloko abazali abazama ukuzenza ezinganeni. Isimo sengqondo samanga wezingane singase sihluke: okokuqala asiyikubambelela ukubaluleka kuyo, ngakho-ke kuyasikhathaza. Kodwa kubalulekile ukukhumbula, lapho ingane ikhohlisa njalo, ngeke kube lula ukuyeka.
Ososayensi bakholelwa ukuthi amanga asezintweni zasenkulisa, ayenokubheka imfashini, impumelelo enkulu ekuthuthukiseni kwengqondo kwengane. Amanga ahlelekile wezingane zesikole kufanele abe yisignali yokuqala ye-alamu kubazali - ingane yakho inenkinga. Indlela yokuchaza ingane ukuthi ukuqamba amanga kubi futhi uyamxosha kulo mkhuba esikhathini esizayo.
Emhlabeni omdala, sisebenzisa igama eliqamba amanga ukuchaza isenzo sokuziphatha esiphansi. Kodwa amanga abantwana ahlukaniswa ngendlela ehlukile. Lapha, umuntu angahlukanisa amanga namanga ukuze azuze imigomo yakhe.
Abasenkulisa babecabanga ukuthi ukukhuluma amanga kungaba yisenzo esingenakufanelekela. Umcabango wabo ucebile kangangokuthi kaningi abakwazi ukuhlukanisa phakathi kweqiniso neqanjiwe. Izingane zithanda ukusungula izindaba ezithi zenzeke kubo noma ngamanye amalungu omndeni, zizitholele ngabalingiswa bezithombe zamakhathuni namageyimu wekhompiyutha, bakha abangane bangempela.
Ezimweni ezinjalo, ukuqamba amanga ngempumelelo enkulu ekuthuthukiseni kwengqondo kwengane - izazi zengqondo zithi. Ukucabanga kuyisignali yentuthuko evamile yenkulumo nokucabanga kwengane. Ukusakaza kuyisisekelo sokwakheka kwengqondo kwengqondo kwengane, futhi umcabango uvumela umuntu ukuba angaqondakali futhi aqonde engqondweni engaziwa.
Ukuqaphela kwengane kusebenza ngezindlela ezimbili - ukutadisha ngokoqobo nokudala inkohliso. Ukuqeda umhlaba wakhe omnandi, ingane yenza umzamo wokwakha eyakhe imfihlo, ucingo uqobo lwabazali bakhe, usho ilungelo lokuphila kwakhe kwangasese. Ungamangaleli ingane ngenxa yokucabanga kwakhe okunamandla. Ngokuphambene nalokho, kufanele usize ingane ukuthi iyenze ngempela umhlaba wangempela. Khuluma nengane mayelana nemicabango yakhe, thisela ukuwadweba. Ngakho-ke, ungasondelana ngokomoya nengane futhi uqonde kangcono umhlaba wangaphakathi wezingqondo zakhe.
Amanga okucabangela anezincazelo ezehlukene emqondweni nasekuziphatheni kwengane. Kodwa uma ubandlululo lungabonakaliswa nhlobo ngabasenkulisa, ngokuphambene nalokho, bayisibonakaliso sengqondo yabantwana abathuthukile, ngakho-ke imibono enjalo emva kweminyaka eyisithupha ingathinta ingqondo yengane yengane, ikakhulukazi lapho yena engakwazi ukuhlukanisa iqiniso namanga. Lapho ingane yesikole-oneminyaka engu-7 eqhubeka nokucabanga, kubalulekile ukuba nengxoxo enzima naye.
Ingane izalwe emhlabeni ngenqweno yobulungiswa nokuhle. Kodwa ukuphila okuqhubekayo, ngeshwa, kwenza ushintsho ekuziphatheni kwakhe. Ngokwemvelo kwabeka umzabalazo wokusinda nokuncintisana okukhona, kuthinta ukuziphatha kwengane - ingane izama ukwenza ngcono kunezinye futhi ihlale ithola lokho akufunayo. Futhi indlela elula kakhulu yobuholi obunjalo kungamanga. Futhi lokhu kungenye yezimbangela ezingamanga zamanga ezingane. Ngokuvamile, izazi zengqondo zihlukanisa izimbangela ezilandelayo eziyinhloko zamanga ezingane:
Ngokuvamile, izingane ziwela ngaphansi kwengcindezi yezifiso ukuthi izihlobo zibeka kuzo. Ngakho-ke, abazali ngokwabo bacela ingane ukuba iqambe amanga, imenzele izidingo ezingathandeki. Ingane ifuna ukuphila ngokuvumelana nokulindelwe kwabadala, ngakho-ke ulala ngamaphuzu akhe. Abazali kufanele bahlolisise ingane yabo futhi bafune kuphela ngaphakathi kwemingcele efanele.
Ingane ingasungula izindaba ezingamanga ukuze ziqaphele, ukuze zizwe zidingeka. Kulesi simo, umuntu kufanele athole okungenani isigamu sehora ngosuku ngosuku lomntwana, futhi nangendlela yonke indlela akhombisa ngayo isithakazelo sakhe empilweni yakhe.
Umntwana uqamba amanga, ngoba wesaba ukuthi uzojeziswa. Babengabazali abathi, ngezimiso zabo zokujezisa, bakhulisa ukwesaba kwengane nokungafuni ukuvuma icala labo ngokutshela iqiniso. Ungazibuze ngokuvulekile ukuthi "Ubani okwenze lokhu?", Ngokwenza kanjalo kucindezela ingane ukuba ilale. Kungcono ukuchaza iqiniso "Ngiyabona okwenzile" futhi ufuna izindlela zokulungisa umonakalo.
Gwema izimo ezicindezelayo.
Ingane ikhohlisa ukufihla izinkinga zomndeni ezivela ngaphandle (hhayi ukuchuma komndeni, abazali bezidakamizwa, ukungabi khona kukapapa).
Umzamo wokubuyisana nezihlobo.
Lapho umntwana efakaza ukuphikisana kwabantu abadala, uzama ukubasiza ngokuzimela, efika nezimo ezingekho.
Kumntwana kuyihlazo ngenxa yesenzo, akafuni, ukuthi ngalokho umuntu ufunde, ngakho-ke ucabanga ngemlando. Okufanayo kwenzeka esikoleni lapho ingane ingazi impendulo kunoma imuphi umbuzo futhi uzama ukuphuma.
Ngokuvamile, ingane ifunda ukuqamba amanga kubantu abadala abaqamba amanga kwabanye noma bacele ingane ukuba itshele omunye amanga. Isibonelo: "Tshela ubaba wakho sahamba ukuhamba." "Uma umama wakho efika, mtshele ukuthi akenzi."
Uyazi kanjani ukuthi ingane ikopela?
Ngokuvamile izingane azikakabi abadlali abanobuchule ukuze bazifihle ngobuqili amanga abo. Ngakho-ke, ukukhwabanisa kungalandelwa ekuziphatheni kwengane, ngoba kunezibonakaliso eziningana ezivamile:
- Ukuguquka kwesibonakaliso sokubukeka, ukubonakala kokunyakaza okungazi lutho;
- Shintsha in tempo yokukhuluma, wehla nge ithoni, stutter;
- Umlutha, umzamo wokushintsha isihloko sezingxoxo;
- Delay nge impendulo.
Indlela yokunqoba amanga wengane?
Cishe zonke izingane zikhuluma amanga ngezikhathi ezithile. Umsebenzi wabazali ukugcina ingane ingamanga, ukuqeda lo mkhuba owonayo kuye. Ngokuvamile ukuphendula kwabazali emangeni amanga kuyisijeziso, nakuba kungenjalo ngaso sonke isikhathi sinikeza umphumela oyifunayo - isikhathi esizayo ingane ingakwazi ukufihla amanga akhe. Ukuze ulwe namanga, kufanele uqale ubone izimbangela zayo, bese usebenza. Zama ukubona isimo ngeso lengane. Bonisa ukuthi silungele ukumthethelela.
Phendula emangeni ngokuhambisana nesigaba seminyaka yengane. Uma ingane ingeneminyaka engu-6 ubudala, ungaphenduli kahle, ungahle uyihlehle. Kodwa uma kuziwa emangeni amanga esikoleni, kufanele ukhulume ngokushesha nomntanakho ngalokho okubangele amanga nokuthi yimiphi imiphumela engase ibe nakho. Umsebenti wakho ukunikeza ingane ukuthi uqonde ukuthi amanga amabi futhi ukuthi amanga ahlale evezwe.
Izenzo zakho ngekusasa.
1. Phendula amanga ngokuthula, gwema imizwelo eyengeziwe nokujeziswa ngokomzimba;
Isixazululo esihlangene senkinga: zama ukuthola imbangela yamanga, ndawonye cabanga ngenye indlela yokuphuma kweso simo.
3. Dumisani ingane lapho ekhuluma iqiniso, ikakhulukazi uma kudinga umzamo kanye nomzabalazo wangaphakathi kuye.
4. Khumbula ukucabanga kokungabi namlandu. Ungenzi iziphetho ngokushesha lapho unecala lomntwana lingasungulwa. Kungalimaza ingane futhi esikhathini esizayo uzokubona njengomuntu ongalungile.
5. Nikeza isibonelo esihle. Umntwana uzwela kakhulu kwabanye abantu, ikakhulukazi uma bemfundisa ukuthi akhulume iqiniso, futhi ngezinye izikhathi amanga. Amanga abantwana bafunda ikakhulukazi kubantu abadala.
Ungakhathazeki kakhulu uma ubamba ingane yakho emangeni. Lona ukuhlolwa kwakhe kokuqala kwezwe elikhulile. Zama ukuthola naye izisusa nezizathu eziholela emangeni. Chaza ukuthi kungenzeka ukuthi uphume kule nkinga ngaphandle kokukhohlisa. Uma usebenzisa amathiphu angenhla futhi ube nengxoxo enhle yengqondo - ingane yakho ngeke ilale. Emva kwakho konke, ingane iqala ukulahlekelwa isidingo lapho engenakho uthando, ukuqonda, ukunaka, ukunakekelwa.
Umkhuba ongapheli wokulala ezinganeni ubizwa ngokuthi i-Munchausen's syndrome. Kodwa izingane ezinjalo zivame ukuwa kaningi - abantu abangu-2-3 kubantu abayizinkulungwane eziyishumi.
Izingane ezilalelayo nezilalelayo
Umehluko ekuboniseni imizwa yabantu abadala nabantwana
Izingane zibuza imibuzo eminingi
Ukuzwa komama kanye nothando lomama
Izingane nomculo zasenkulisa
Yini okufanele udlale nengane encane?
I-Mackerel ye-salting eyomile
IJam eyenziwe ngamagilebhisi
Umlando wami odabukisayo wokubeletha
Inhlanzi emhlophe emvilophini ene-capers
I-Rhesus-impikiswano - inkinga yokukhulelwa
Ukufaka ibhasikidi lamathobhu wephephandaba
I-horoscope yasentshonalanga yezimpawu zezinkanyezi
Incazelo yegama elithi "indoda enobudlova"
Izindlela zokupheka ezingcono kakhulu zeladidi ngobhontshisi ekheniwe
Amabhantshi amantombazane azintandokazi nezesimfashini
Imikhiqizo - abangane kanye nezitha zomuntu
I-lavash ngenyama enobuthi